Displaying 51-60 of 194 results.
स्थानीय निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोगमा प्रतिवन्ध
काठमाडौं, १८ फाल्गुन । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।
निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादबले बुधवार मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलपछि प्रमुख
सप्तरीमा फेरी स्कूलमै बम फेला, सेनाले निष्कृय पारियो
सप्तरी, १८ फाल्गुन । सप्तरीको राजविराज–५ स्थित रुपनी रोडको छेउमा एउटा विद्यालयको परिसरभित्र सकेट बम फेला परेको छ ।
राजविराज–५ रुपनी रोडमै पर्ने लक्ष्मी इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुल परिसरभित्र बुधबार विहान सो बम फेला परेको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक
लहान क्याम्पसमा तोडफोड, क्याम्पस प्रमुख थुनिए
सिरहा, १७ फाल्गुन । सिरहाको लहानस्थित जे.एस. मुरारका बहुमुखि क्याम्पसमा अनेरास्ववियू र नेविसंघले चुनाव तोकेको मिति (फाल्गुन १८ गते) स्ववियू निर्वाचन गराउनुपर्ने भन्दै क्याम्पसमा तोडफोड गरेका छन् ।
निर्वाचन हुने निर्णय गर्न नेविसंघ र अनेरास्ववि
सिरहामा मोवाइल चार्ज गर्दा सिंहको मृत्यू
सिरहा, १७ फाल्गुन । घरमा बिजुलीको होल्डरबाट मोवाइल चार्ज गर्न खोज्दा करेण्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका एक यूवकको सिरहामा मृत्यू भएको छ ।
गोलबजार नगरपालिका ५ असनपुरका कमलेश सिंहको मृत्यू भएको हो । करेन्ट लागेर गम्भिर घाईते उनलाई उपचारका लागि गोलबजा
देउवा पत्नी आरजुले आशासँग राजदूत बनाउन २ करोड घुस लिएको खुलासा, हेर्नुस् कसले कति बुझायो
काठमाडौं, १७ फाल्गुन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पार्टीभित्रैबाट आर्थिक लेनदेनका आधारमा विवादित ब्यक्तिलाई राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरेको आरोप लागेको छ । राजदूत जस्तो पद पनि कांग्रेसले किनबेचको बस्तु बनाएर देशकै बेइज्जत हुने काम गरेको छ । .. .. ..
विदेश घुम्न नेपालीले खर्चिन्छन् वर्सेनि ५६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं, १७ फाल्गुन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीको तुलनामा नेपालीले विदेश घुमघाममा धेरै खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेपाल आएर विदेशीले गर्ने खर्चको तुलनामा नेपाली पर्यटकले विदेश भ्रमण (आउटबाउण्ड) टुरिजममा.. .. ..
वीरगञ्ज नाकामा किन थन्किए ३ हजार नयाँ गाडी ?
पर्सा, १७ फाल्गुन । सीमावर्ती सहर रक्सौलमा डेढ महिनायता ३ हजार भन्दा बढी नयाँ गाडी थन्किएका छन् । तिनमा जिप, कार, भ्यान र बस ट्रकका चेचिस छन् ।
वीरगञ्ज भन्सार वार्डमा भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट आयातित करिब २ सय जिप, कार, भ्यान धुलाम्य छन् । आयातकर्ताले
रविन्द्र मिश्र बीबीसीको जागिर छाड्ने, नयाँ पार्टी खोल्ने
काठमाडौं, १७ फाल्गुन । चर्चित पत्रकार रविन्द्र मिश्रले बीबीसी नेपाली सेवा छाड्ने भएका छन् । राजनीतिमा लाग्न उनले बीबीसी नेपाली सेवाको मासिक ६ लाखको जागिर छाड्न लगेका हुन् ।
दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ– मिश्र नयाँ पार्टी स्थापना गर्न ल
अनुमतिबिना अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नपाइने
काठमाडौं, १७ फाल्गुन । विचाराधीन फौजदारी कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीले कुनै कसुरको सिलसिलामा अभियुक्त पक्राउ गर्नुपरे मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । संसद्को विधायन समिति मातहतको फौजदारी कार्यविधि उपसमितिले यस्तो व्यवस्थ.. .. ..
फोरम नेपाल सिरहाको प्रथम एकता अधिवेशन आजबाट
सिरहा, १६ फाल्गुन । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सिरहाको प्रथम एकता जिल्ला अधिवेशन आजबाट सिरहा सदरमुकाममा सुरु हुँदैछ । दुई दिनसम्म चल्ने अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिनेछ ।
अधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले गर्ने कार्यक्रम छ